Momba ny tsiambaratelo, Ubuntu sy Mark ... ny famerenana. | Avy amin'ny Linux
Ao amin'ny tsiambaratelo, Ubuntu sy Mark… ny hevitra.
Amin'ity indray mitoraka ity dia mila mamerina ny asa rehetra aho, tsy amin'ny fomba ratsy, fa amin'ny fomba tsara.
Olona maro no naniry ny hanitsy ahy tamin'ny lahatsoratra farany, maro no marina, ary na dia taorian'ny namakiako izay rehetra novakiako aza, nohadihadiana izany ary tsapako fa eny, amina teboka maro no diso aho, dia mijanona ho toy izany hatrany ny hevitro.
Ok, manomboka amin'ity rehetra ity Manazava amin'ny rehetra aho izany Canonical tsy hanidy ny fampandrosoana Ubuntu izany Ary izany, ny resaka troll na mankahala dia tsy hihoatra ny fehezan-teny antonony, mba tsy hahatongavan'izy ireo any aoriana hilaza amintsika fa maloto isika.
Amin'izay dia nodiovina isika, andao hanomboka.
1 Inona no dikan'ny Mark Shuttleworth?
2 Inona no tena tianao holazaina amin'ny fitazonana tsiambaratelo?
3 Fanehoan-kevitra mahaliana
Inona no dikan'ny Mark Shuttleworth?
Tsia, tsy misy, iray amin'ireo zavatra angatahin'i Mark ao amin'ny lahatsoratry ny bilaoginy ny hoe tsy mila entin'ny resaka ataon'ny olona ianao, ary marina izany. Eto aho afaka miresaka zavatra manan-danja roa:
Ny fanarahana izay ambaran'ny tsirairay raha tsy manapa-kevitra ianao dia hevitra ratsy foana.
Ohatra iray lavorary amin'izany ny faharatsian'ny olona miresaka momba ny Firaisankina nefa tsy nanandrana na nanandrana ny antsasany, izany hoe raha iray na roa andro dia izay. Tsy isalasalana fa nitondra laza ratsy be dia be teo amin'ny tontolon'ny birao izay, na dia manana ny maharatsy azy (toa ny rehetra) dia tsy ilay menarana no naka fanahy an'i Adama sy Eva.
Ny tsy tia tsy ho tia hatrany.
Ubuntu dia samy manana Fanboys sy Haters, ny roa tonta dia vaky noho ny eritreritr'izy ireo ary tsy misy fomba hialana amin'ny anton'ny fiankohofana / fankahalany. Angamba izany no tian'i Shuttleworth holazaina rehefa niresaka izy "Sorohy ny tsikera". azo antoka fa ny tsikera fanatisma (na avy amin'ny lafiny iray na amin'ny lafiny hafa), dia tsy misy isalasalana fa lesoka izay ahitanao azy, tsy maninona fa manana teboka marim-pototra izy ireo; tsy mitanila ireo dinika ireo.
Inona no tena tianao holazaina amin'ny fitazonana tsiambaratelo?
Tafiditra ao anaty izay miteraka resabe isika, ilay andianteny "Tsiambaratelo". Ny finoana namboarina tato ho ato dia mitoetra ao: "Hakaton'izy ireo ny kaody"; tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy, tsy hanidy na inona na inona izy ireo.
Ny fironana manaraka dia ny mieritreritra: "Tsy haneho na inona na inona ao amin'ny Betas na any amin'ny Alphas izy ireo ary rehefa hamoaka ny vokatra farany dia ho loza izany". Marina izany amin'ny ampahany, toa tsy hametraka izany any Betas sy / na Alphas izy ireo, saingy, toa (tsy voalaza io raha tsy amin'ny hevitry ny paositra) hiara-hiasa amin'ny an'i PPA izy ireo, hatolotra aloha izy ireo fanandramana mihidy ny modely X an'ny programa ary aorian'ny fanandramana ataon'ny mpamorona maromaro (samy avy amin'ny Canonical na malaza amin'ny fiarahamonina) dia hamoaka izany kaody izany amin'ny alàlan'ny PPA ka izay maniry dia afaka mametraka ny tanany.
Hoy i Marka momba an'io:
Ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fiarahamonina dia miasa amin'ny tetik'asa manokana. Manao izany koa ireo mpifaninana amintsika. Misy isan'ireo fanovana apetraka amin'i Gnome avy amin'i Red Hat ohatra, izay avy eo lasa nopotserina ho "fahendren'ny mpikojakoja" na "volavolan-doko". Misy isan'ny fanambarana, prototypes, patanty ary fanapahan-kevitra hafa raisina samirery, ataon'ny mpikambana rehetra amin'ny vondrom-piarahamonina rehetra. Na eo amin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo aza dia mahazatra ny mahita olona miteny hoe: “Efa nijirika momba an'io aho nandritra ny fotoana kelikely, izao dia mila valiny aho”.
Izay nadika tamin'ny teny Anglisy nahatsiravina ahy dia ho toy ny:
Ny mpikambana rehetra ao amin'ny fiarahamonina dia miasa amin'ny tetik'asa manokana. Manao toy izany koa ireo mpifaninana amintsika. Betsaka ny fanovana napetraka GNOME ny Red Hat, ohatra, izay voamarika tsara ihany koa taty aoriana "Fanapahan-kevitra momba ny mpikojakoja" na "Designers Design". Betsaka ny prototypes, patanty ary ny fanapaha-kevitra izay atao miafina any amin'ny vondrom-piarahamonina rehetra, eny fa na dia ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina an-tsitrapo aza dia miteny. "Hey, efa niasa momba an'io aho nandritra ny fotoana fohy ary izao dia mila fanamarihana kely aho."
Na dia misy antony iray aza ny zavatra lazainy, satria imbetsaka isika izay mamolavola na inona na inona, dia manao zavatra miafina aloha ary avy eo mamoaka azy isika, dia hitako fa toe-javatra roa samy hafa tanteraka izy ireo; na farafaharatsiny nampiavaka.
Voalohany indrindra, izaho, amin'ny maha developer ahy, dia zara raha manana fahaiza-manao raha oharina amin'ny Canonical, tsy mila tompon'andraikitra amin'ny olona aho ary tsy manana tetikasa lehibe ampiasain'ny olona ana hetsiny eny an-tanako. Ary tsy afaka mandeha mihazakazaka toy ny fampitandremana ny olona aho, amin'ny maha mpandraharaha mahaleo tena ahy Hey! Manomboka mamolavola zavatra iray aho, ary mahazo tsipika 100 izay tsy manao na inona na inona, izay tsy mandeha, fa eto izy ireo = D »
Canonical ohatra, amin'ny maha orinasa anao dia afaka manao zavatra roa ianao:
Lazao ny hevitra ary asehoy ho tetikasa mety tsy mila manolo-tena na inona na inona, karazana "Zavatra efa nanjo antsika izany, ahoana ny hevitrao?" na; ataovy izay lazain'izy ireo, atombohy amin'ny miafina, ary avy eo afaho ny sombin-tsarimihetsika. Ny faharoa dia tsy ratsy velively raha mbola mitoetra toy ny voalaza miaraka amin'ny PPA izy io, raha tsy izany, azafady, tsy mendrika izany.
Tokony ampiana ihany koa fa misy hevitra marobe tena mahaliana ao amin'ilay lahatsoratra, na ny manohana na ny manohitra ary ny tsy miandany.
Ohatra, maro no mitodika any amin'izay lazain'i Makr:
Canonical dia nanjary fenitra raha ny fampandrosoana mangarahara no resahina.
Na zavatra toa izany, tadidio fa tsy mahay tsara ny teny anglisy-ko.
Fanehoan-kevitra roa voarainy momba izany (ary tsy handika izany aho, izay omena ahy) dia:
Toa hadinonao ny fakanao, ny olona Debian no nametraka ny fenitry ny mangarahara, fa tsy ny Ubuntu. Heck, na i mandriva aza dia mangarahara tamin'izany fotoana izany, miaraka amin'ireo olona avy any ivelany (izaho) afaka mitantana ny cluster build (zavatra mbola tsy omen'ny Canonical, raha toa kosa ka i Fedora, Mageia, Debian no).
Ary ity iray ity koa:
Andriamatoa Shuttleworth, ahoana no ahafahanao milaza fa nametraka ny fenitry ny mangarahara i Ubuntu raha avy amin'i Debian izy io? Debian dia mamela ny olona rehetra handray anjara sy mampivelatra ny fanatsarana hatrany amin'ny sehatra malalaka mifanohitra amin'ny tetikasa Canonical toa ny Ubuntu for Android. Gentoo dia toy izany koa.
Raha matotra amin'ny mangarahara ianao, maninona raha mandroso Ubuntu ho an'ny Android sy tetikasa hafa ambaran'i Canonical ao amin'ny trano fitehirizam-bahoaka? Heveriko fa hankasitraka izany ny tetikasa Cyanogenmod.
Misy ihany koa ireo izay manohana azy ary, avy eo, dia mametraka fisalasalana mety, toa an'ity, izay ahatsapako fa amantarana ahy:
Heveriko fa tamin'ity hetsika ity dia tena hisokatra kokoa ny Ubuntu fa farafaharatsiny 1 na 2 taona farafahakeliny izay fivoarana be dia be no natao tao an-trano (tao amin'ny Canonical) ary tsy nampahafantarina ampahibemaso andro vitsivitsy monja talohan'ny nihena ireo endri-javatra.
Amin'izany no hidiran'ny fiaraha-monina (ireo izay naneho fahavononany).
Ny ahiako (raha azoko antsoina hoe ahiahin'izy ireo) dia ireto:
Iza no manapa-kevitra hoe iza amin'ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina no naneho fahavononany handray anjara tamin'ireto tetikasa ireto.
Ary ny fomba ahafahan'ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina mangataka hiasa amin'ity "tetikasa miafina" ity raha tsy fantany izay tetikasa any. (Raha ho fantatr'izy ireo fa tsy "miafina" kokoa ireo tetikasa)
Na izany na tsy izany alahelo izany dia hetsika tsara. Farafaharatsiny tsara kokoa noho ny tamin'ny taona lasa.
Amin'ny faran'ny andro dia tsy maninona aho hoe manao ahoana ny fivoaran'ny endri-javatra fa izaho kosa tena miahy ilay endri-javatra.
Aiza no azo atao mba hamonjy ny ahiahin'ity mpampiasa ity, izay nanangana:
Iza no manapa-kevitra hoe iza no mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina hampihatra izay mety handray anjara amin'ireo tetikasa ireo?
Ahoana no ahafahan'ny vondrom-piarahamonina mangataka amin'ireo tetikasa ireo sy / na mampiasa azy ireo raha izy ireo "Tsiambaratelo" ary tsy mahalala na inona na inona momba azy ireo izy ireo?
Betsaka ny fanehoan-kevitra hovakiana saingy, amin'ny tena marina aminao, tsy mikasa ny handrava ny lahatsoratra manontolo nataon'i Mark Shuttleworth, lavitra azy aho.
Ny hevitro dia mbola tsy niova be loatra, tsy mbola resy lahatra tanteraka aho ary tsy mahazo aina amin'ireo fanapahan-kevitra ireo satria, raha ny marina, ho ahy dia mbola misy faran'izay malalaka tsy maintsy fehezina. Ny fotoana dia hilaza raha izany rehetra izany dia hevitra tsara na ratsy, mihoatra ny hevitra rehetra izay fantatr'i Canonical izay ataony na tsia, azy ireo izany olana izany, ary ho fantatr'izy ireo hoe inona na iza no miasa na tsy miasa ao amin'io orinasa io.
Mino aho fa izany dia ampy hampitony ny olan'ny maro ary hialana amin'ny adihevitra rehetra izay tsy dinihiko amin'ireo loharano marina. Manomboka izao dia heveriko fa ny fanehoan-kevitra na fanakianana dia tokony ho momba ny fandikako ireo loharano, izay efa zavatra tena manokana.
Loharano: Mark Shuttleworth Blog
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ao amin'ny tsiambaratelo, Ubuntu sy Mark… ny hevitra.
Tsara toy inona no nanamboaranao, ny zavatra tokana izay lahatsoratra nitory teo aloha dia FUD.
Tehirizo ny Ubuntu sy Xubuntu ary izao Lubuntu hehe.
Ary ahoana i Nano.
Marina ny teninao amin'ny zavatra rehetra iadian-kevitrao ary tahaka anao aho mino aho fa misy antsipiriany sasantsasany mba hametrahana azy amin'ny fomba sasany (ary tsy hanafintohina na hampahatezitra hamorona resabe) dia aza miafara amin'ny famolavolana ny maro.
Tsy dia nahasarika olona ity lahatsoratra teo aloha ity ary tsy azoko napetraka teo amin'ny latabatra ny adihevitra marina, na dia mijanona eo amin'ny toerako ihany aza aho fa na dia manao ahoana ny fandravanan'izy ireo azy dia tsy mividy azy aho.
Heveriko fa mizotra tsara ...
Topazo maso ny ohatra raisin'ny Linux Mint. Tsy mamoaka betas na alphas mihitsy izy ireo ... ny hevitra mety ho azon'izy ireo amin'ny hoe "mety" azony ampidirina amin'ny famoahana azy ireo manaraka.
Tsy fantatrao mihitsy hoe ahoana no hahatongavan'ny kanelina vaovao raha tsy andramanao ... Nefa azo tsapaina amin'ny alàlan'ny PPA ... Tsy ratsy izany filozofia izany, izay misoroka ny fitsikerana.
Man, dia ny Mint raha ny marina dia tsy mamorona OS, maka ny zava-drehetra avy amin'ny Ubuntu na Debian ho an'ny LMDE izy ary manaparitaka azy amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ao anaty DE ary manampy codecs sy PPA vitsivitsy, vanim-potoana.
Ary amin'ny resaka solosaina dia tsy dia misy ifandraisany firy na rahoviana na rahoviana rehefa mivoaka (miantso ny KDE, GNOME, XFCE, sns), afa-tsy ny manary tena irery ianao, satria tsy hahita Alphas na Betas an'ny DE ianao. (izany hoe, tsy ho hitanao velively ny Ubuntu amin'ny LTS miaraka amin'ny kinova Unity tsy marin-toerana, na i Debian sy Fedora iharan-doza amin'ny Gnome 3.6 amin'izao fotoana izao, na ny Arch mitovy, sns), ireo rafitra miasa ihany.
Aza mahita azy amin'izany fomba fijery izany koa, satria amin'ny farany, inona no ho Ubuntu raha tsy eo i Debian? Mint dia manana ny fampiharana azy toa an'i Ubuntu. Ny filozofia dia: Raha misy izy dia ampiasaiko, raha misy izy ary tsy mety amiko, dia novaiko, ary raha tsy eo dia ampiako.
Ny olona, ​​ny Mint dia saika tsy mamorona SO
KZKG ^ Gaara: MintBackup, MintNany, ary ny sisa amin'ny Mint Tools. Kanelina, ny Manager fanavaozana anao manokana, ny foibe fanaraha-maso anao manokana. Moa ve tsy mivoatra izany? Lazao amiko hoe inona izany ho anao hivoatra amin'izay .. ¬¬
Tsaroako izao fa rehefa nampiasa Mint ny fitaovana tokana tsy tiako dia ny MintUpload, ny ambiny dia nanamora ny fiainako, haha.
FromLinux dia bilaogy lava, mahavariana ary pedagogical izy io, fa isaky ny mamaky ny lahatsoratr'i Nano aho sy ny valiny omena ny hevitry ny mpamaky sasany dia mampijaly azy ireo, milaza amin'izy ireo fa troll izy ireo, saika hoe adala izy ireo. Azoko tsara fa i Nano dia olona tena manan-danja amin'ity sehatra Linux ity, saingy tsara foana fa ireo mpamorona an'ity bilaogy mahafinaritra ity, hoy i Nano, dia mifehy tena.
Fidirana tena tsara, izany no manoratra fa tsy ny shit ataoko.
PS: Nano, ny fomba nitondranao ny ratsy nataoko no nitondrako anao mandrakizay doria ...
Andao hojerentsika. Eny, efa notenenin'izy ireo ho alefako izy io, fa raha mbola eto aho dia misy antony, sa tsy izany?
Tsy vao sambany izy ireo no mitsikera ahy noho ny fomba nanehoako ny hevitro ary azoko antoka fa tsy izy no farany satria, eto amintsika, tsy mikasa ny hanova azy aho.
Ny zava-misy dia tsy vao sambany ny olona mampihomehy te-hanao troll ary rehefa ariana ny fanehoan-kevitr'izy ireo dia sosotra izy ireo.
Zavatra iray hafa ihany koa no tsara homarihina, ary izany dia ny mpampiasa be loatra…. "Sensitive" ary na inona na inona miresaka azy ireo, tsy manafintohina fa ohatra ianao, satria tsy manonona anarana na miteny adala amin'ny olona aho, dia milaza fotsiny aho fa ireo izay mahatsapa fa "impulse of idiocy" dia ialao ny trolling izay mitranga rehefa kely indrindra antenao io (ampidiriko).
Tsy mikasa ny hiala tsiny aho satria tsy mitady hanafintohina olona aho ary tsy hijanona tsy hilaza ny hevitro toa ahy satria io foana no fombako.
Manazava aho fa tsia, tsy rototra amin'ireo kiana aho na dia heveriko fa tsy tiako ny manao azy ireo amin'ny fanehoan-kevitra ary mamily ny entana rl, satria misy mailaka avy amin'ny bilaogy ary na izany na tsy izany.
Ny olana dia raha mpampiasa vaovao hafa fotsiny ianao dia tsy maninona na tsy mahalala fomba ianao na tsy mahalala fomba na mivantana, fa satria mpitantana eto ianao dia antenaina fa hanana fahasahiana bebe kokoa ianao, hahafahanao mandresy fanakianana manimba TSY MISY manafika ny mpampiasa.
Impiry ianao no nahita fa nanafika mpampiasa iray mivantana aho?
Io no heveriko fa tondroin'ny tsirairay.
Tsy tokony hiantso mpampiasa ho troll ianao, na dia nanao fanehoan-kevitra tsy dia nahafinaritra aza izy ireo, satria ny fanehoan-kevitra dia tsy mamaritra hoe troll na tsia ...
Tsotra ny lojika.
Ianao dia ao amin'ny DesdeLinux toy ny olon-drehetra satria mpampiasa eto ianao, saingy ianao ny sary avy amin'ny FromLinux satria mpandrindra serivisy maro ianao, tsy ny bilaogy ihany, no takatra?
Tsy natao ho an'ny trolling fa i Nano fanindroany… tokony ho araka izay itiavany azy ny tsirairay ary raha misy mizara amiko ny hevitra hoe tokony hajanin'i Canonical ny hevitra hoe "avelao ny vondrom-piarahamonina hivoaka" dia tokony holazaiko izany. Azo antoka izao fa misy ny UbuntuFanBoy tonga milaza fa ny Canonical dia tsy tokony hanome fanazavana amin'ny olona hafa hehe
Tsy te hiala amin'ny fampiharana ny mason-tenan'ny tenako aho, ny tsy hanome ny hevitro ... TSY nidika izany fa, ny fomba famaliana ny mpamaky matetika.
Ary tsy tiako ho diso hevitra koa aho. Ratsy ny nitondrako ny mpampiasa azy, saingy fantatrareo tsara fa ireo izay nitondrako izany dia tsy noho izy ireo ondry.
Tsy nanala baraka mpampiasa na oviana na oviana aho raha tsy nampahatezitra ahy farafaharatsiny indroa ary na dia izany aza dia tsy fanaovan-dratsy tsy ara-dalàna izy ireo. Mihoatra noho ny fahafantaran'ny olona rehetra fa tsy maintsy misy olona manana toetra masiaka foana ary amin'ity tranga ity aho izaho ve.
Zavatra iray hafa, tsy izaho ary tsy ho Courage, tsy manana toetra matanjaka izy, tsy mahay mandrefy ny fiteniny fotsiny izy, izay zavatra roa samy hafa.
Na izany na tsy izany, amin'ity lahatsoratra ity dia tsy manafintohina olona aho ary mangataka fa tsy troll izy ireo, na dia amin'ny fomba nanontaniako aza dia tsy fandikan-dalàna.
ronono28 dia hoy izy:
Tsy tokony ho rendrika ao anaty vera ianao raha amin'ny farany tsy tianao ny Ubuntu, misy distro hafa koa, ka tsy mila mieritreritra na mety na diso ianao raha mahasoa anao amin'ny maha mpampiasa anao azy io fa raha mahatsapa ianao fa ny fiarahamonina dia hanjary hikatona mangingina, mitadiava iray hafa an-tapitrisany izay azonao andraisana anjara na kely na betsaka ny fahalalanao.
Mamaly an'i milky28
Ny marina dia marina ny anao fa manana fanboys i Ubuntu, ary mitovy amin'izany amin'ny Mint. Fa ny zavatra tsy heveriko fa rariny dia ny hoe mody fanboy daholo ny mpampiasa Ubuntu na ny Mint. Mint no ampiasaiko, ary averiko dinihina ny fanandramako an'i Ubuntu, tsy fantatro ny antony, fa misy zavatra tiako io. Ary tsy izany no mahatonga ahy ho mpankafy ... mpiaro ny RPM aho, indrindra ny Fedora, satria amiko dia iray amin'ireo birao mahery vaika indrindra misy ankehitriny, fa hiandry aho mandra-pahatapitry ny taona hivoahan'ny 18 hametraka azy, azo antoka.
Mint miaraka amin'ny MATE dia milamina ary tsara araka ny hevitro. Ny kanelina dia mety tsy ho marin-toerana fa tiako izany. Miaraka amin'ny LMDE dia manana traikefa kely aho, saingy mieritreritra aho fa raha hampiasa LMDE dia mampiasa Debian aho, na dia "madio" Debian aza tsy tiako haha
Izay fotsiny, antenaiko fa raha amin'ny farany dia mifandimby Mint amin'ny Ubuntu aho dia tsy hitondranao ahy toy ny fanboy, satria tsy izany aho, manandrana tsy mizaha tavan'olona aho ... Raha ny tena izy, isan'andro dia miova ny tiako, tsy mety ho fanboy na mankahala aho hahaha
Miala tsiny amin'ny fampihorohoroana amin'ny fiteny, izay nametrahako ny "tena izy" dia "raha ny marina" !!!
Mangina ... Raha ny marina ny MInt dia toy ny mampiasa ubuntu fa saika vita daholo 😉
Ary mazava ho azy, mahatalanjona i fedora
Tsy dia ampiasaiko mora na inona na inona izany. Tena tiako ny 'maloto ny tanako' toa an'i Arch haha
Amin'ny ankapobeny dia mampiasa Mint for Cinnamon aho, izay mahita akorandriaka tsara kokoa ho an'ny GNOME 3 noho ny GNOME Shell na Unity, na dia tiako be daholo aza izy telo.
Marina izany ... akorandriaka tsara ny kanelina .. raha ny marina dia azo apetraka ao amin'ny Fedora izy ary mandeha tsara .. Ny hany zavatra tsy vitako dia ny fametrahana ny Artwork of Mint ho an'ny Kanelina ao amin'ny distro hafa, Toa ny fomba tokana ahafahana mankafy an'io zavakanto io dia ny any Mint; (
Raha tsy tsikaritrareo dia mampiasa Ubuntu ihany ilay mpanoratra ilay lahatsoratra.
Misy ny mpankafy ny zava-drehetra, amin'ny tsiro, loko ary habe rehetra. Raha hampiasa na hijanona tsy hampiasa zavatra iray ianao amin'izany antony izany dia tsy hahita zavatra maimaimpoana mihitsy.
Ny kanelina 1.4 dia havaozina ho 1.6 amin'ny Mint Maya ihany rehefa mivoaka i Romeo (na dia azo apetraka avy eo aza izy izao). Fa raha manokana ianao raha manontany ahy eo anelanelan'ny Ubuntu sy Mint Mate dia tena mamporisika anao aho hijanona ao Mint, ny olana tokana amiko dia ny fanjifana CPU matetika indraindray, raha tsy izany mandra-pahatongan'ny fanavaozana tsara an'i Kanelina dia hitohy ilay entin'i Mate. mahereza kokoa.
Avadiho ho rakitra PDF ny sary
Ahoana no hahalalana ny MD5 na SHA amin'ny teny, fehezanteny na fisie